အမျိုးသမီး | Shwe Phee Myay
Read more about A beautiful heart hero who fails under tradition
တိုက်ပွဲကြားက မေ့လျော့ခံ ဘဝများ Mai Rukaw Wed, 01/27/2021 - 06:00
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူနဲ့ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မန်တုံမြို့နယ်ထဲက တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တိုက်ပွဲဒဏ်အပြင် ကိုဗစ်ဒဏ်ကိုပါ ခံစားနေရပါတယ်။
ကိုဗစ်မဖြစ်ပွားခင်ကတည်းက ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကို ကြုံတွေ့နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကြာလာတာနဲ့အမျှ မိသားစု ဝမ်းစာရေးအတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုမိုရုန်းကန်လာရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်ဖြည့်ရုံသာ မဟုတ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်စေနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
Read more about တိုက်ပွဲကြားက မေ့လျော့ခံ ဘဝများ
ပထွေးရဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ခံခဲ့ရသူနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှု (၄)ကြိမ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ်းသူ Lway Aye Mee Fri, 01/22/2021 - 05:34
Read more about ပထွေးရဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ခံခဲ့ရသူနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှု (၄)ကြိမ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ်းသူ
ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲက စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
Lway Hnin Phyu Wed, 01/20/2021 - 02:47
ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်၊ ကျောက်မဲ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲက စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ အသက်(၃၁)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တစ်ရပ်ကွက်တည်း အတူနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်က အဆိုပါ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်တည်း ဆော့ကစားနေစဉ် တစ်ရပ်ကွက်ထဲ နေထိုင်တဲ့ အိုက်ပြုံး(၃၁ နှစ်)ဆိုသူက ၎င်းအမျိုးသမီး နေထိုင်တဲ့ တဲပေါ်ကိုတက်လာပြီးနောက် ငွေတစ်ရာတန် ၂ ရွက်ပေးပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲက စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
Read more about ဓလေ့ထုံးတမ်းအောက် ရှုံးနိမ့်နေသော နှလုံးရည်လှ သူရဲကောင်း
ငွေကြေး ကုန်ကျမှု လျော့နည်းစေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းအတွက် တီထွင်မှုအသစ်
Lway Am Shwe Le Tue, 01/19/2021 - 06:42
လျှော်ပြီး ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို အသုံးပြုတာ နည်းပါးသလို ဒီလိုပြန်လျှော်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလည်း သိသူက ရှားပါတယ်။
ဒီလျှော်ပြီး ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးဟာ အမျိုးအစားက လေးမျိုးရှိပြီးတော့ လွတ်လပ်မြေ အဖွဲ့အစည်း (FREELAND Organization)အောက်က လူမှုယှက်နွယ်စီးပွားရေးက ဦးဆောင်မှုနဲ့ ထုတ်လုပ်နေတာပါ။
Read more about ငွေကြေး ကုန်ကျမှု လျော့နည်းစေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းအတွက် တီထွင်မှုအသစ်
မိုင်းငေါ့က အမျိုးသမီးတစ်ဦး လက်ဖက်ခြံထဲ အလုပ်လုပ်နေစဥ် တူမီးသေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရ
Mai Rukaw Tue, 01/19/2021 - 04:26
ရွှေဖီမြေ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်၊ ကျောက်မဲ
မနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ခွဲ ကွန်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စု အောက်စျေးရပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး ၁ ဦး တူမီးသေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပစ်ခတ်ခံရသူ အမျိုးသမီးဟာ အသက်(၅၅)နှစ်အရွယ် ဒေါ်အေးယွမ်းဖြစ်ပြီး မနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်မှာပဲ ကျေးရွာခံတွေက ကျောက်မဲမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Read more about မိုင်းငေါ့က အမျိုးသမီးတစ်ဦး လက်ဖက်ခြံထဲ အလုပ်လုပ်နေစဥ် တူမီးသေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရ
လက်မထပ်ပဲ ကလေးရခဲ့ရင် ရွာအပြင် နေထိုင်ခိုင်းတဲ့ ဓလေ့ Lway Aye Mee Tue, 01/19/2021 - 04:15
လူငယ်ချင်း ချစ်ကြိုက်ရာကနေ မှားယွင်းပြီးနောက် ကလေးရလာတဲ့အခါ ရွာထဲမှာ မနေထိုင်ခိုင်းပဲ ရွာအပြင်မှာသာ နေထိုင်ခိုင်းတဲ့ ဓလေ့ဟာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
လွေးမို(အမည်လွှဲ)ကလည်း သူမရဲ့ ယောကျာ်း၊ ရက်သားအရွယ် ကလေးငယ်နဲ့အတူ အခုလို နေထိုင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဒါကလည်း ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ကတည်းက ကျင့်သုံးလာတဲ့ ဓလေ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဓလေ့တွေဟာ အခုခေတ် အခုခါမှာ ရှိသင့်သေးသလား?
ဘာကြောင့် အခုလို ရွာအပြင် လယ်တဲထဲမှာ နေထိုင်ခိုင်းတာလဲ?
ရွှေဖီမြေရဲ့ ရုပ်သံသတင်းထောက် လွေးအေးမီးက တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Read more about လက်မထပ်ပဲ ကလေးရခဲ့ရင် ရွာအပြင် နေထိုင်ခိုင်းတဲ့ ဓလေ့
Subscribe to အမျိုးသမီး